Shirkii Muqdisho oo baaqday kadib markii Madaxweynaha Puntland diiday in uu ka qeybgalo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShirkii Muqdisho oo baaqday kadib markii Madaxweynaha Puntland diiday in uu ka qeybgalo
July 5, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Farmaajo iyo Deni. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shir ay Dowladda Federaalka Soomaaliya ku casuntay madaxda dowlad goboleedyada oo qorshuhu ahaa in uu Muqdisho ka furmo July 5, 2020 ayaa dib u dhacay.
Ujeedada rasmiga ah ee sababtay dib u dhaca ayaan weli aysan sheegin dowladda dhexe, balse ka baaqista Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ah sababta ugu weyn ee keentay in shirku uu dib u dhaco, sida ilo-wareedyo ka ag dhow shirka ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Asbuucii la soo dhaafay, isagoo ka hadlayay sanadguurada 60-aad ee xornimada Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Gaalkacyo, Madaxweyne Deni ayaa sheegay in uu aqbalayo baaqii kasoo baxay baarlamaanka Puntland ee dowladda u sheegayay in aysan ka qeybgalin shirka Muqdisho.
Baarlamaanka Puntland ayaa dowladda ugu baaqay in aysan ka qeybgalin shirka Muqdisho oo u dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubna ka ah Federaalka.
Bayaan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya 25-kii bishan June ayaa Madaxweyne Farmaajo uu ku casumay madaxweynayaasha maamul goboleedyada in ay ka soo qeybgalaan shir ka dhici doona Muqdisho bilowga bisha July.
Ilo-wareedyada ayaa Puntland Mirror u sheegay in madaxweynaha Puntland maalmihii u dambeeyay lagu qancinayay in uu ka qeybgalo shirkaas, balse uu si qayaxan u diiday.
Inkastoo tan iyo markii uu xilka qabtay Madaxweyne Farmaajo sanadkii 2017 uu xumaa xiriirka ka dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sida Puntland iyo Jubbaland, haddana khilaafka ayaa aad u sii xumaaday wixii ka dambeeyay shirkii Garoowe ee horaantii sanadkii 2019, kaasoo natiijo la’aan ku dhammaaday.
July 11, 2020 Shirka u dhaxeeya Dowladdaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka furmay Dhuusamareeb